ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ပံ့ပိုးမှုများသည်မည်သည့်အရေးအကြီးဆုံးနည်း။ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
Ana L | | အိႏၵိယ
La အိႏၵိယထိုနိုင်ငံသည်၎င်းထက်ပြည်နယ်တစ်ခုထက်ပိုသည့်တိုက်ကြီးဖြစ်သည် ထောင်စုနှစ်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏များစွာသော ထိုတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများမှာအနုပညာ၊ ဒphilosophန၊ အတွေး၊ သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ gastronomy နှင့်ကြွယ်ဝသောအရသာတို့ကိုအိန္ဒိယမှပံ့ပိုးမှုများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားစွန့်ခွာစေသည်ကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါ။
ဤတချို့ရှိနေပါတယ် ကမ္ဘာကြီးကိုအိန္ဒိယ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုမဟာအလက်ဇန္ဒားကတည်းကဒီတိုက်ငယ်တွင်တီထွင်ခဲ့သောနည်းပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတိုးတက်မှုသတင်းများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။
ကန ဦး အနေနဲ့တော့ဘာသာစကားအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းငါပြောမယ် ဥရောပ၌ဥရောပဘာသာစကားများပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ရှေးအကျဆုံးသောဘာသာစကားလေးမျိုးဖြစ်သည့် Sanskrit, Latin, Greek and Persian တို့တွင်အရေးကြီးသောတူညီမှုများရှိသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အိန္ဒိယသဒ္ဒါပညာရှင်များသည်ယခင်က Sanskrit ဟုဖွဲ့စည်းထားသည့်ဒြပ်စင်အမျိုးအစားများကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဥရောပဘာသာစကားများ၏အသံထွက်နှင့်သဒ္ဒါစနစ်များကိုအခြားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုနှင့်အပြီးသတ်ထားသည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံး၏နိဂုံးမှာပရိုတို - အင်ဒို - ဥရောပဘာသာစကား၊ လေ့လာခဲ့သောဘာသာစကားများအတွက်ဘုံမိခင်ဘာသာစကားရှိခြင်းနှင့်၎င်းတွင်ရှိသင့်သည်သောအသံထွက်နှင့်သဒ္ဒါလက္ခဏာများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ဒို - ဥရောပသည်ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန့်မှစတင်ကာပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဂ
အိန္ဒိယကိုအသိအမှတ်ပြုသည် ဒphilosophန၏မိခင် ဟိန္ဒူဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဆစ်ခ်ဘာသာအားလူ့အတွေးအခေါ်ကိုပေးခဲ့သည်။ အနောက်နိုင်ငံများတွင်အတွေးအခေါ်သည်ဂရိနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယူဆရသည်၊ သို့သော်ဤယဉ်ကျေးမှုသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုများမှအတွေးအခေါ်နှင့်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
ယနေ့အိန္ဒိယ၏အတွေးအခေါ်များကိုလေ့လာနေပြီးယင်း၏ကိရိယာအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်တွင်ထည့်သွင်းလျက်ရှိသည်။ ဥပမာ - ဘာဝနာသည်သတိရခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလူအများစု၏အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုမှာအပြည့်အစုံအပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းသော်လည်းကောင်း စုပေါင်း၍ အောင်မြင်လျှင်၎င်းသည်စုစုပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ခင်ဗျားမြင်နေရတယ်၊ စဉ်းစားပုံရလောက်အောင်ဟောင်းနွမ်းလွန်းတဲ့အတွက် ၂၁ ရာစုမှာသန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုနယ်နိမိတ်ပြင်ပရောက်နေတယ်။
ရေမင်ကိုရေတွက်ရန်သင်ကြားပေးခဲ့သောကြောင့်အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကကမ္ဘာကြီးသည်ဟိန္ဒူများအပေါ်များစွာအကြွေးတင်နေသည်ဟုဆိုခဲ့သည် အိန္ဒိယသည်အက္ခရာသင်္ချာ၏သိပ္ပံကိုကြွေးတင်နေသည်, ယေဘုယျအားဖြင့်ကိန်းဂဏန်းစနစ်။ ရှင်းနေသည်မှာသုညသည်အိန္ဒိယသင်္ချာနှင့်နက္ခတ္တဗေဒ၏ရှေးရိုးခေတ်မှပထမဆုံးသင်္ချာပညာရှင်နှင့်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Aryabhatta အတွက်များစွာပေးဆပ်ရသည်။ သူသည်နှစ်ပေါင်း ၄၇၆ မှ ၅၅၀ ကြားတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ Bihar တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်စာလုံးပေါင်းနှင့် Pi နံပါတ်နှင့်အနီးစပ်ဆုံးလေ့လာမှုများကိုအသုံးမပြုသော်လည်းသင်္ချာကိုသူ၏ ၀ အတွေးအခေါ်မပါဘဲနားမလည်ခဲ့ပါ။
အပြင် သင်္ချာနှင့်နက္ခတ္တဗေဒတွင်ခေတ်သစ်ခေတ်ရိုးရာအိန္ဒိယဆေးပညာကိုများစွာပေးဆပ်ရသည်, Ayurveda ။ အထူးကုစင်တာများတွင်ပြုလုပ်သည့်သုတေသနမှတွေ့ရှိရသည်မှာ Ayurvedic အခြေခံမူသည်ခေတ်သစ်ဆေးပညာနှင့်လိုက်ဖက်ပြီးသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ခြင်းသည်ဤဆေးပညာကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေသည်။
ငါဒီဆောင်းပါးပါးအကြောင်းပြောနေတာမပါဘဲအဆုံးသတ်ချင်ကြဘူး အနုပညာနှင့်နေသောအိန္ဒိယကနေပံ့ပိုးမှုများကို ကျန်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Taj Mahal ကဲ့သို့သောလက်ရာမြောက်သောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ၏အလှတရားကို1631ကရာဇ်မင်းက Shah Jahan ကသူ၏အကြိုက်ဆုံးအတွက်ဂူဗိမာန်အဖြစ် ၁၆၃၁ နှင့် ၁၆၅၄ အတွင်း Agra တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောအဆောက်အအုံ၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုစဉ်းစားရန်ကံကောင်းသည်။ ဇနီး။
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ ဒေလီရှိ Red Fort ၏ရှေ့မှောက်၌သောကြာနေ့ဗလီကဲ့သို့သောအလှပဆုံးသောအခြားbeautyရာမလက်ရာများကိုအံ့ stop စရာကောင်းသည်။ ပန်းရောင် Jaipur မြို့နှင့်၎င်း၏ Hawa Mahal သို့မဟုတ် Palace of the Winds of the Winds, Konarak ၏ Sun Temple, Fatehpur သို့မဟုတ် Qutab Minar, ဒါပေမယ့်ငါကျန်ရှိနေသေးသောကမ္ဘာ၏ကျန်အိန္ဒိယနိုင်ငံများအတွက်ကျေးဇူးတင်သင့်တယ်ထင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ရှိလျှင်, ဒါဟာနယူးဒေလီရှိ Raj Ghat, ရိုးရှင်းစွာ Mahatma Gandhi ၏အမှတ်တရ နေရာ, သမိုင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပြည့်ဝ၏နီးပါးဘုရားဖူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀ ရာစုရဲ့သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေစာရင်းထဲမှာဒီလူနဲ့သူ့နိုင်ငံရေးကိုနားလည်တဲ့နည်းလမ်းကိုမေ့လို့မရဘူးလေ။ သူသည်သမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည့်ဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ၏လွတ်လပ်ရေးကြောင့်သာမကလမ်းစဉ်ကြောင့်လည်းပါ ၀ င်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကမ္ဘာကြီးကိုအိန္ဒိယ၏ပံ့ပိုးမှုများ
ကောင်းပါတယ်၊ ပံ့ပိုးမှု ၅ ခုရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်
ကောင်းပြီ, ငါ Zulema နှင့်အတူသဘောတူသည်
သုတေသနအလွန်ကောင်းသည် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
hahahahaha napazo မိန်းကလေးများငါ့ကို amen
null အိန္ဒိယတွင်ငါလှပသောတိုင်းပြည်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ချစ်သောမာရီယို၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထိုတွင်တွေ့ခဲ့သည်
တစ်ထောင်တောင်းပန်လည်း ananga ranga
ငါ့ကိုငါအနည်းဆုံးငါ့ကို gague hahahajujuju
ပြီးတော့ငါတန်ဖိုးနိမ့်ဆုံးအပျိုစင်အဖြူရောင်မိန်းကလေးနဲ့စာသားရဲ့ခြေထောက်လေးခုလုံးမှာ reggarton ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။
တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ GAS ...
moreSiEl ChAvEs MoorAlS ဟုသူကပြောသည်
အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။
SIEl ChAvEs mOrAlEs များကိုပိုမိုတုံ့ပြန်ပါ
CAMILO APONTTE ဟုသူကပြောသည်
CAMILO APONTTE သို့အကြောင်းပြန်ပါ
အရမ်းကောင်းတယ် နှင့် bnas ပုံရိပ်များဂုဏ်ပြုလွှာ! ဒီလိုဆက်လုပ်ပါ။ c:
ချစ်တယ် bebibisss .... လှပသောစာမျက်နှာကိုမှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်တူသောအရာများစွာကိုထည့်သွင်းရန်
BGA စာမျက်နှာကဲ့သို့ OMG ကဲ့သို့! <3
<3 တေးဂီတရဲ့အကောင်းဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ယုံကြည်သူယုံကြည်သူတစ် ဦး လိုပဲနမ်းပါ
သင်တစ် ဦး ယုံကြည်သူမဟုတ်လျှင်လိုပဲ
ဒါရိုက်တာ vs. သင်မှတ်ချက်မပေးခဲ့လျှင် Velievers (Yo Directioner) အကယ်၍ Justin Bieber osea veliever ကဲ့သို့သင်မှတ်ချက်မပေးပါ
ကောင်းပြီကိုယ့်အနည်းငယ် xd နားလည်လျှင်
ဟိန္ဒူဘာသာကိုပထမ ဦး ဆုံးဘာသာရေးနှင့်အစဉ်အလာကိုသံသယဝင်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
minecraf တော်တော်များများ .. netflix ကကစားတယ် (rafa) ……………………………………။
Luis Cane ၊ ဟုသူကပြောသည်